काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा नसोचेको भयो ! यसरी सफल बन्यो प्रहरी !!
प्रहरीले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा ५० फिट गहिरो इनारमा खसेकी महिलाको सकुशल उद्दार गरेको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका ३ मित्रचोक बस्ने सिन्धुपाल्चोककी ४५ वर्षीया पेमा शेर्पाको सोमबार साँझ ६ बजेर ३५ मिनेट जाँदा इनारबाट सकुशल उद्दार गरिएको हो ।
सोमबार महानगरीय प्रहरी प्रभाग बुढानिलकण्ठ र प्रहरी प्रधान कार्यालय विपद व्यवस्थापन महाशाखा सामाखुसीबाट खटिएको १७ जनाको प्रहरी टोलीले स्थानीय हरि श्रेष्ठको घरमा रहेको इनारमा खसेकी पेमाको सकुशल उद्दार गरेको हो ।
श्रेष्ठकै घरमा डेरामा बस्दै आएकी थिइन् । इनारमा खसेकी पेमालाई अर्धचेत अवस्थामा उद्दार गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
दिउँसो साढे २ बजे पेमाको परिवारले उनी हराएको भन्ने सूचना प्रहरीलाई दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै प्रहरी टोली उनको खोजीमा जुटेको थियो । ३ घण्टाभन्दा बढी समय खोजतलास गरेपछि पेमालाई प्रहरी टोलीले डेरा गरेर बस्दै आएको घरको इनारमा अर्धचेत अवस्थामा फेला पारेको थियो ।
इनारबाट उद्दार गरिएलगत्तै उनलाई बुढानिलकण्ठस्थित करुण अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्याइएको छ । अहिले उनको स्वास्थ्यावस्था सुधार हुँदै गएको बताइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
२०७८ चैत्र २२, मंगलवार प्रकाशित0Minutes 282 Views